Trump: Duullaanka Turkigu ku qaaday Suuriya ma aha mid ka dhan ah Mareykanka - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaTrump: Duullaanka Turkigu ku qaaday Suuriya ma aha mid ka dhan ah Mareykanka
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in duullaanka uu Turkiga ku qaaday xudday Suuriya uusan ahayn mid lagu qaaday “xudduuddooda”, waxa uuna intaa ku daray in Kurdiyiintu oo xulufo la ahaan jiray mareykanka aysan ahayn “malaa’ig”.
“Waxaa la joogaa xilligii ciidamadayadu ay dalka ku soo laaban lahaayeen,” ayuu yiri Trump.Xubnaha Aqalka Wakiillada ee baarlamaanka Mareykanka oo ay ku jiraan kuwa xisbiga Jamhuuriga ee madaxweyne Trump ayaa cambaareeyay tallaabada uu Mareykanka ciidamadiisa ugala baxay dalka Suuriya.
Dowladda Turkiga ayaa dooneysa inay halkaas ka sameyso “aag nabdoon” oo la dajiyo dadka qaxootiga ah ee ka cararay colaadda ka socota Suuriya, gaar ahaan kuwa hadda ku sugan gudaha Turkiga.
Markale Kurdiyiinta waxay noqdeen kuwa lagu dan gaaray, waxayna markale miciin bideen cadowgoodi hore – xukuumadda Dimishiq.
Haseyeeshee, mas’uuliyiinta dalka Ruushka ayaa sheegay in aysan marnaba oggolaan doonin dagaal toos ah oo dhex mara ciidamada dowladda Suuriya iyo kuwa Turkiga, xilli hadda howlgalka Milatari ee Turkiga uu kasii socdo Waqooyiga Suuriya.
“Arrintan waa mid aan la aqbali karin… sidaas awgeedna ma oggolaan doonno, dabcan”, sidaas waxaa yiri danjiraha khaaska ah ee Moscow u qaabilsan Suuriya, Alexander Lavrentyev.
Dadka wax dhaliila ayaa sheegay in go’aankii uu Mareykanka isbuucii lasoo dhaafay ugu dhawaaqay inuu ciidamadiisa ka saarayo Suuriya uu fursad siiyay Turkiga.